जिज्ञासा र सान मिगुएल को गर्मी को वैज्ञानिक पक्ष नेटवर्क मौसम विज्ञान
लगभग हरेक वर्ष, सेप्टेम्बरको अन्तमा आइपुग्दा, शरद ofतुको आगमनले तापक्रम घट्न थाल्छ। जे होस्, सेप्टेम्बर २ of को हप्ताको अवधिमा तापक्रम फेरि बढ्छ। यो यस रूपमा चिनिन्छ सान मिगुएल को गर्मी। यो एक हप्ता हो जुन तापक्रम बढेको मानौं हामी ग्रीष्म returningतुमा फर्कदैछौं।
यस लेखमा तपाईले उत्सुकता र सान मिगुएलको गर्मीको वैज्ञानिक पक्षहरू जान्न सक्नुहुनेछ। के तपाइँ यसका सबै रहस्यहरू पत्ता लगाउन चाहानुहुन्छ?
1 सान मिगुएल को गर्मी कहिले हो?
2 यसलाई क्विन्स समर किन भनिन्छ?
3 त्यहाँ हरेक वर्ष सैन मिगुएल को गर्मी छ?
4 ओड र अन्य ग्रीष्मकाल
5 सैन मिगुएल को गर्मी को भनाइ
सान मिगुएल को गर्मी कहिले हो?
जब गर्मी को अन्त्य हुन्छ, धेरै मानिसहरू तापमान मा ती थोपाहरू डराउँछन्। काममा फिर्ता, नियमित र कठोर जाडो। सामान्यतया, थर्मामीटर ड्रप गर्न थाल्दछ जब सेप्टेम्बर घुमाइन्छ र गिरावटको मौसम सुरु हुन्छ। यद्यपि सेप्टेम्बर २ end मा समाप्त हुने हप्तामासान मिगुएलको दिनमा, तापक्रम फेरि बढ्यो मानौं ग्रीष्म returningतु फर्कँदैछ।
यस गर्मी को समयमा स्पेन मा degrees० डिग्री को तापमान पुग्छ। यो गर्मी अर्को वर्ष सम्म अलविदा भन्न फर्के जस्तै हो। यस सानो गर्मी को नाम सेन मिगुएल को दिन, सेप्टेम्बर २ on को उत्सवका कारण हो।
केही स्थानहरूमा यसलाई यस रूपमा चिनिन्छ Veranillo डेल मेम्ब्रिलो वा Veranillo डे लॉस आर्किन्जेल्स। र यो यो छ कि यो धेरै रमाईलो तापमानको साथ एक सानो अवधि हो जुन चिसो को प्रवेशलाई रमाईलो बनाउँदछ। यस समयमा केहि दिनहरू छन् जुन हामी गर्मीमा पर्यावरणीय अवस्थाको सीमामा छौँ। यद्यपि, दिनहरू पछि शरद cतुमा यसको शीतल हावाको साथ फिर्ता आउँदछ।
यो सामान्यतया सेप्टेम्बरको अन्तमा र अक्टोबरको सुरूमा हुन्छ। उच्च तापमानको अवधि कुनै विशेष कारकमा उपस्थित हुँदैन। यो वातावरणमा परिवर्तन हो जुन तापक्रमको उतार चढाव र एन्टिसाइक्लोनिक मौसम जसले राम्रो मौसमलाई मन पराउँदछ।
यसलाई क्विन्स समर किन भनिन्छ?
हामीले उल्लेख गरेका छौं कि यसले यो नाम पनि प्राप्त गर्दछ र यो किनभने यी मितिहरूमा यो जब क्विन्सन फसल को छ।
यस अवधिलाई किसानहरूले बप्तिस्मा लिए जसले यस बालीको फसल समयलाई जनाउँथे। पहिले, Quinces प्रेम अफ्रोडाइटको देवी द्वारा सुरक्षित गरिएको थियो। त्यसैले यो भनिन्छ कि रानी प्रेमको फल हो।
त्यहाँ हरेक वर्ष सैन मिगुएल को गर्मी छ?
यो सानो गर्मी वार्षिक आधारमा वायुमण्डलीय घटना भन्दा बढि केहि छैन। यी मितिहरूमा तापमान एक हप्ताको लागि रहन र फेरि गिरावट। संयुक्त राज्य अमेरिका पनि यस्तै प्रकारको घटना हो भारतीय समर (भारतीय समर)। जर्मन भाषी देशहरूमा यसलाई Altweibersommer भनिन्छ।
ठीक त्यस्तै केहि दक्षिणी गोलार्द्धमा जुन २ 24 को वरिपरि हुन्छ। तिनीहरूको लागि जाडो यस समयमा शुरू हुन्छ। यद्यपि सान जुआनको दिनको वरिपरि तापक्रम केही हदसम्म यस्तै आउँछ। तिनीहरूले यस अवधिलाई सान जुआन को गर्मी भन्छन्।
यद्यपि त्यहाँ धेरै मौसमविद्वीय भनाइहरू छन्, विज्ञान यी लोकप्रिय भनाइहरू र विश्वासहरूको असंख्य वर्णन गर्न सक्छ। यद्यपि यस अवस्थामा यस गर्मीमा औचित्य प्रमाणित गर्न कुनै वैज्ञानिक कारण छैन। तर किन यो हुन्छ यसको केहि कारणहरू वर्णन गर्न सम्भव छ।
सेप्टेम्बरको अन्ततिर आधिकारिक गर्मी समाप्त भएको छ। यस समयमा हिउँदको पहिलो प्रभाव वायुमण्डलमा महसुस हुन थालिसकेको छ। यो मौसमको स between्क्रमणको बीचमा महत्त्वपूर्ण क्षण हो जसमा चिसो दिनहरू प्राय: न्यानोसँग मिल्दछ। त्यसैले, परिवर्तन वातावरण सामान्यतया केही दिनको मौसम राम्रो हुन्छ शरद inतुमा तापमानमा पहिलो खसेपछि।
त्यहाँ हरेक वर्ष सैन मिगुएल को गर्मी हुनु हुँदैन। यो एक प्रवृत्ति हो जुन वर्षौं बर्ष जारी रहन्छ तर यस्तो हुनु हुँदैन।
ओड र अन्य ग्रीष्मकाल
त्यहाँ धेरै वर्षहरू छन् जहाँ सान मिगुएलको गर्मी भएको छ, तर अरूहरू जुन यो थिएन। नोभेम्बर ११ नजिकको मितिहरूमा अर्को समान प्रवृत्ति छ, जुन दिन सान मार्टेन मनाइन्छ। आजका दिनहरु हामी गर्मी को एक अन्तिम "प्रहार" ग्रस्त छौं तापमान को वृद्धि संग। यस अवस्थामा, उदय गर्मीमा जस्तो उकालो हुँदैन, तर यसले हामीलाई वसन्तको सम्झना गराउँदछ। तपाईं भन्न सक्नुहुनेछ कि यो गर्मीले हामीलाई चेतावनी दियो कि यो चाँडै नै फर्कनेछ र हामीसँग धैर्यता छ।
त्यो ग्रीष्म .तु ठाउँ लिनुहोस् वा छैन सम्भावनाको कुरा हो। गर्मी र चिसो दिनहरू बदल्नु यी संक्रमणकालीन asonsतुहरू जस्तै वसन्त र शरद inतुमा धेरै सामान्य हुन्छ। तिनीहरू यति भनिन्छन् किनकि ती संतहरूको उत्सवको मितिसँग मेल खान्छन्।
यदि वर्षौंलाई फर्केर हेर्‍यौं भने हामी देख्न सक्छौं कि त्यहाँ वर्षौं बितिसकेको छ जुन स्यान मिगुएलको ग्रीष्म hadतुमा हामी थिएनौं। हामीसँग १c1664; र १ 1919 १ in मा मर्सियामा बाढी छ; १1764 मा मलागामा, १ 1791 1858 १ मा भ्यालेन्सियामा र १ 29 30 मा कार्टाजेनामा। सेप्टेम्बर २ and र 1997०, १ XNUMX XNUMX On मा, अलिकान्टमा दुःखदायी बाढी आयो
हालसालै बाढीले September सेप्टेम्बर २ to देखि २,, २०१२ सम्म लोर्का, पोर्टो लुम्बरेस, मालागा, अल्मेर्वा वा एलिसेन्टेमा असर पारेको छ, जसले धेरै व्यक्तिको ज्यानसमेत लिएको छ। त्यसकारण हामी कुनै खास विज्ञानको साथ यो छैन कि यो न्यानो एपिसोड प्रत्येक वर्ष आउँछ।
सैन मिगुएल को गर्मी को भनाइ
हामीलाई थाहा छ, लोकप्रिय भनाइ यो मौसम र बालीनाली संग गर्ने सबै मा धेरै धनी छ। यस अवस्थामा यी तिथिहरूका सबै भन्दा राम्रो ज्ञात भनाइहरू छन्।
सान मिगुएलको लागि, ठूलो तातो, यो ठूलो मूल्यको हुनेछ।
सान मिगुएलको गर्मीमा मह जस्तो फलफूलहरू छन्
सेप्टेम्बरमा, महिनाको अन्त्यमा, तातो फेरि आउँछ।
स्यान मिगुएलको लागि, पहिलो नख्रोटी, पछि सेस्टनट।
सान मिगुएल को गर्मी धेरै विरलै हराइरहेको छ
सबै फलहरू स्यान मिगुएलको लागि तातोसँग राम्रो छ।
यस जानकारीको साथ तपाईं यस सानो गर्मी को बारे मा अधिक जान्न सक्नुहुनेछ जुन हामी शरद temperaturesतुको तापक्रम र चिसो जाडोको आगमनमा आइपुगेको थोपाको सामना गरेर आनन्दसाथ मनाउँछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Divulgation » सैन मिगुएल को गर्मी